१९. प्रयास - Harish Bk
Home/ Article/१९. प्रयास
Harish BK November 11, 2017
अर्नेस्ट हेमिङवेको कालजयी कृतिको नाम हो– ‘ओल्ड म्यान एन्ड सी’ अर्थात् बूढा र पहाड । यस कृतिले सन् १०५४ को साहित्यमा दिइने नोबेल पुरस्कार कुम्ल्याएको छ । त्यस वर्ष हजारौं साहित्यकारले आफूले पुरस्कार पाउने आशा राखेका होलान् । तर, भाग्यको साथ दियो हेमिङवेलाई । बाहिरबाट हेर्दा यो भाग्यको कमाल देखिए पनि गुदी कुरा यो उनको कर्म अर्थात् परिश्रमकै परिणाम भन्न सकिन्छ । उनले पुरस्कार थापेको दुनियाँले देखे तर उनले यसका लागि कति पसिना चुहाए थोरैले मात्र थाहा पाए । सुनिन्छ– यस पुस्तकलाई उनले कैयन्पटक पुनःलेखन गरेका थिए । यहाँसम्म कि यस पुस्तकको अन्तिम भागलाई उनले दुई सयपटकसम्म लेखन तथा पुनःलेखन गर्न भ्याएका थिए । कति रे ? दुई सय पटक, हो दुई–दुई सय पटक । कल्पना गर्नुुस् त । एकै पन्नालाई मात्रा पनि दुई सय पटक सार्नुपर्दा कति समय खर्च होला ? कति धैर्यको खाँचो पर्ला ? अतः हेमिङवेले नोबेल पुरस्कार पाउनु यस अर्थमा मुनासिबै देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा थोमस एल्बा एडिसनको कुरा बहुत सटिक दखिन्छ । मैले गरेको परिश्रम नियालेर हेर्ने हो भने मैले पाएको परिणामदेखि मान्छेलाई अचम्म लाग्दैन ।
प्रसंग बदलौं । समसामयिक विश्वमा सबैभन्दा बढी बिकेको पुस्तकमध्ये एउटा हो– ‘चिकन सुप फर योर सउल’ अर्थात् आत्माका लागि अमृत । यस पुस्तकका लेखकद्वय हुन्– ज्याक क्यान फिल्ड र मार्क हेन्सन । उनीहरूले यो किताबलाई तयार पारीवरी प्रकाशककहाँ पठाए । तर, प्रकाशकले सुधारको अपेक्षासहित फर्काए । लेखकद्वयले यसलाई पुनःलेखन गरेर प्रकाशककहाँ फेरि पठाए । फेरि पनि अझै सुधारको सुझावसहित पुस्तक फर्काइयो । उनीहरूले हार मानेनन् । बरु अझै सशक्त सामग्रीसहित पुस्तक प्रकाशकलाई ठम्याए । तर, यसपालि पनि पुस्तक छापिएन । कुरा तीन–चारपटकको प्रयासमा टुंगिएन । उनीहरूले आफ्नो पुस्तकलाई ३४ पटकसम्म लेख्न, फेरि लेख्न बाध्य भए । अन्ततः पैंतीसौंपटकको भगिरथ प्रयास र अपार धैर्यपछि पुस्तक निस्कियो र रातारात यसले विश्व बजार ओगट्यो । अतः असम्भव केही पनि हुँदैन । मात्र प्रयासको कमीले ‘असम्भव’ जन्मिने हो ।
३२. निरन्तर प्रयास